अर्थ मन्त्रालय स्थापना गर्न हिमालयशमशेर राणाको अहम् भूमिका छ । अन्ततः राणा त्यही मन्त्रालयको पहिलो सचिवसमेत बने । उनी पहिलो गभर्नर पनि हुन् । तराईमा पहिलोपटक नेपाली नोट प्रचलनमा ल्याउने उनले भारतीय एक सय रुपैयाँको दर/रेट १६० तोकेका थिए । संवत् २०१७ चैत मसान्तमा निर्धारण गरिएको दर/रेट अहिले पनि कायम छ । राणाजी भए पनि […]
दीपेन्द्र राई घरधनी र यातायात व्यवसायीले इमानदारीपूर्वक राजस्व बुझाउने हो भने देश विकासका ..
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा २८ वर्ष लामो समय जागिरे जीवन बिताएका चिरञ्जीवी चापागाईं अहिले बीमा स..
मोती दुगड विराटनगरका स्थायी बासिन्दा हुन् । यहीँ जन्मेहुर्केका दुगड नेपालको प्रतिष्ठित औद्..
दीपेन्द्र राई सय वर्ष अघिसम्म संसारभरि १ लाख बाघ थिए । सय वर्षपछि ३५ सयको हाराहारीमा मात्र..
‘३३ वर्षे बैंकिङ करिअरमा कैयौं मानिसलाई लखपतिबाट करोडपति बनाएको छु,’ सिभिल बैंक कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किशोर महर्जनले सुनाए, ‘करोडपतिलाई अर्बपति बनाएँ । अब आफैंले व्यापार थाल्ने कि भन्ने सोचेको छु ।’ सिभिल बैंक स्थापनाकालदेखि सीईओ महर्जनको दोस्रो कार्यकाल आगामी साउन १२ बाट सकिँदै छ । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे उनी सोच्दै छन् । ..
दीपेन्द्र राई हिमालपारिका जिल्ला भनेर चिनिएको मुस्ताङलाई स्याउको राजधानी मानिन्छ । मुस्ताङलाई स्याउको राजधानी बनाउने भूमिका कृषिविद् मदन राईले निर्वाह गरेका हुन् भन्न स्थानीय किसान कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन् । स्थानीय किसानले त्यसो भनिदिँदा कृषिविद् राई आफू सफल भएको ठान्छन् । रासायिक मल, बीउ बाँड्ने र प्रचार/प्रसार गर्दै आएका उनल..
अर्जुन पन्त काठमाडौ, जेठ १० – आफ्नै समर्थनमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर गत साउन १९ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि सुरुमै प्रश्न उठेको थियो – ‘चीनसँगको वान बेल्ट वान रोड, फास्ट ट्रयाक र चुनाव के हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डलाई भारतसामु लम्पसार..
चलचित्र क्षेत्रमा जीवनको रथ लामो समय गुडाउन नसकेका थुप्रै जोडी छन् । त्यस्तोमा कलाकार सरिता लामिछाने र निर्देशक ऋषि लामिछानेको वैवाहिक जीवन यात्रा सबैका लागि उदारण बन्ने गरेको छ । वैवाहिक जीवनको २०औँ वर्षसँँगै विताएका उनीहरूकी ९ वर्षकी छोरी छिन् । दुवैजना चलचित्र क्षेत्रमा आआफ्नै तरिकाले सक्रिय छन् । सरिता र ऋषिलाई देखेर डाहा गर..
दीपेन्द्र राई ‘कम्युनिस्ट पार्टी धेरै भए,’ माओवादी केन्द्र हेडक्वार्टर सदस्य टंक राईले भने, ‘कम्युनिस्ट मन पराउने जनमत ६६ प्रतिशत छ । परिवर्तनका लागि कम्युनिस्ट प्रतिबद्ध हुन् भने एउटै फोरम/झन्डामुनि बस्न किन नसक्नु ?’ कम्युनिस्ट पार्टीलाई महासंघीय ढाँचामा लगेर एउटै फोरम/झन्डामुनि अटाउन सकिन्छ । महासंघीय ढाँचामा जाँदा कसले कति ह..
काठमाडौंबाट हिँडेर जुम्ला पुग्न २६ दिन लागेको उनले बिर्सेका छैनन् । हिँड्नुको मज्जा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन रे । त्यतिबेला हिँडेर पुगेका अधिकांश ठाउँमा हिजोआज सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् । पहिले पुगेका ठाउँ अहिले कस्ता भए होलान् भनेर उनलाई हेर्ने तीव्र इच्छा छ । इच्छा पूरा गर्ने साइत कहिले जुर्ला त्योचाहिँ भन्न सक्दैनन् । त्यतिबे..
दीपेन्द्र राई तराईमा पहिलोपटक नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउन सफल हिमालयशमशेर राणाको अर्थ मन्त्रालय स्थापना गर्न अहम् भूमिका थियो । पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणा र पहिलो अर्थ सचिव हिमालयशमशेरले मन्त्रालय स्थापना गर्न थुप्रै पापड बेलेका थिए । पाँच वर्ष अर्थ सचिव रहेका हिमालयशमशेरले पहिलो गभर्नरको भूमिकासमेत निर्वाह गरे । २४ ..
दीपेन्द्र राई ‘काठमाडौंको अहिलेको स्वरूप र संरचना उसको आफ्नै इतिहासको उत्पादन हो,’ मानवशास्त्री सुरेश ढकालको बुझाइ छ, ‘आफ्नै इतिहासको परिणाम अर्थात् परिणति हो । काठमाडौंको जुन चरित्र निर्माण भएको छ, त्यसको ऐतिहासिक कालक्रम छ ।’ काठमाडौंको समाजशास्त्रीय चरित्र बुझ्नलाई यसको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ । समाजको संरचना कस्तो छ भनेर हेर्न..
आफूलाई गलत लाग्यो भने मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी विरोध गर्न कुनै आइतवार कुर्दैनन् । मानवअधिकारकर्मी पहाडी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा सीके राउतबाट मुलुकलाई खतरा देख्छन् । केही समयअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयन्द्रको व्रतवन्धमा आयोजित भोजमा होटल सोल्टी पुग्दा उनले चर्को विरोध गरे । मानवअधिकार, शा..
दीपेन्द्र राई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर बिहानदेखि बेलुकासम्म नियाल्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ‘क्याराभान’ देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने गएकै छन् । तर, नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङ खोटाङबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं पसेका जनक राई जतिसुकै अप्ठ्यार..
कार्यवहाक प्रधानमन्त्री, दुईपटक उपप्रधानमन्त्री र पाँचपटक मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका भरतमोहन अधिकारी नेपालको संविधान २०४७ लेख्नेमध्येका एक हुन् । नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्री अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम ल्याउँदा संसद्मा लखेटिनुपरेको थियो । भन्नेले राष्ट्..
दीपेन्द्र राई जापानमा मात्रै होइन, युरोपमा समेत बुद्धिजीवी मानिसलाई लाटोकोसेरोको संज्ञा दिइन्छ । तर, नेपालमा काम नलाग्नेलाई उल्लु (लाटोकोसेरो) जस्तो भनेर गाली गरिन्छ । त्यही लाटोकोसेरो किसानका साथी हुन् भनेर धेरैलाई थाहा छैन । अरूलाई त भएन/भएन किसानलाई समेत थाहा छैन । लाटोकोसेरो किसानका साथी लाटोकोसेरो किसानका साथी भन्ने गरिन्छ ..
चक्रपाणि चालिसेद्वारा लिखित ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली’ शीार्षकृत राष्ट्रगान संवत् २०६३ जेठ ४ गतेको व्यवस्थापिका संसद्ले खारेज गर्यो । खारेजपछि नयाँ राष्ट्रगानका लागि आह्वान गरियो । सरकारले वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय राष्ट्रगान चयन कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले राष्ट्रगानका लागि एक हजार दुई सय ७२ गीत..
जनकपुरधाम, बैशाख ६– बैशाख ३१ को लागि घोषणा भएको स्थानीय चुनावलाई लिएर सवैभन्दा ठूलो बहस राजधानीमा छ । तराई–मधेश केन्द्रित राजनीति दलहरुले आफ्ना माग पुरा नगराएसम्म मधेशमा चुनाव हुन नदिने अडान राखेका छन् । तर, यस्तो अडान काठमाडौंमा बसेरठूला नेताले सुनाईरहेका हुन्छन् । चुनावको विषयलाई लिएर मधेशका जिल्लामा बसेर राजनीतिक गरिरहेका स्थ..
दीपेन्द्र राई ७० वर्षअघि । त्यतिबेला काठमाडौं जान चाहने जोकोहीले भिसा लिनुपथ्र्यो । काठमाडौं जानेले भिसा लिनुपथ्र्यो भनेर सुन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो पर्ला । नपत्याइ सुखै छैन । संवत् २००४ साल मंसिरमा भिसा लिएर पहिलोपटक काठमाडौं टेकेका भोजपुरका इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ जीवित साक्षी हुन् । मकवानपुरको भीमफेदीमा भिसा लिनुपथ्र्यो । शिक..
शम्भु दंगाल/अमरेन्द्र यादव बैशाख ४, जनकपुरधाम – जनकपुरको मुजेलिया गाँउ दुई दिनदेखि शोकमग्न छ । ३ दिन देखि हराएका साढे ६ बर्षका बालक कृष्ण राउतको शब घरकै सेफ्टिट्याँङ्कीमा फेला परेपछि परिवार र छिमेकी शोकमग्न बनेका हुन् । शनिबार दिँउसो कृष्णको शब प्रहरीले घरको आँगनको छेउमा रहेको सेफ्टिट्याङ्कीबाट निकालेदेखि कृष्णका हजुरबुवा ..
नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलाई राजनीतिमा लागेर गल्ती गरिस् भन्नेहरूको कमी थिएन । त्यसो भन्नेलाई नेमकिपा अध्यक्ष बिजुक्छे भन्थे, ‘राजनीतिमा लाग्नु कर्तव्य हो ।’ सुन्नेले उनको कूटनीतिक उत्तर बुझ्न कठिन थियो । विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिशास्त्रको प्राध्यापक बन्ने उनको सपना पूरा हुन सकेन । घुस खान नपर्ने पेसा र..
२२ वर्षअघिसम्म प्लास्टिक सर्जरीका लागि विदेशबाट चिकित्सक झिकाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । प्लास्टिक सर्जन डा. शंकरमान राईले जन्मजात खुँडे, तालु फाटेका, आगोले पोलेका र दुर्घटनामा परेर अंगभंग भएकाका लागि नयाँ जीवनदाता भएर कहलिएका छन् । अमेरिकाबाट प्लास्टिक सर्जरी तालिम लिएर फर्केपछि डा. राईले सालिन्दा खुँडे र..
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकार हेरफेर हुनुअघि जीवनबहादुर शाही संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको भूमिकामा थिए । सरकार हेरफेरसँग मन्त्री शाहीले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । ‘पानी बेचेरै नेपाललाई धनी बनाउने सकिन्छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न भए पनि नेताको मानसिक कमजोरील..
नेपाली सेनामाथि दुई छिमेकीको आँखा
काठमाडौँ, चैत १८ – चिनियाँ रक्षा मन्त्री तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केको तेस्रो दिन भारतीय सेना अध्यक्ष काठमाडौँ आए । चीनका रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वान तीन दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी चैत १२ गते स्वदेश फर्केका थिए । चिनियाँ रक्षा मन्त्री फर्केको तेस्रो दिन भारतका स्थल सेनाध्यक्ष विपिन रावत चैत १५ गते चार […]